Isayizi enkulu ye-alumina tube ye-ceramic China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ama-Tuber Ceramic > I-Alumina Tube Ceramic > Isayizi enkulu ye-alumina tube ye-ceramic
Isayizi enkulu ye-alumina tube ye-ceramic
I-Model No.: JH.CT.011
Amanye amashubhu amakhulu usayizi adingekayo ukuze ahlangabezane nesidingo semishini emikhulu. Sinekhono lokubhekana nokuhlanzeka kwesibhamu esikhulu se-ceramic esinezinga eliphezulu ngokucindezela okuphezulu okomile nokucindezela. C uqobo, siye sahlinzeka ngezinga elihlukahlukene le-alumina ye-ceramic tube, esukela ku-95% kuya ku-99.7%.
Siyakwazi ukufeza ubukhulu bokucushwa okuyinkimbinkimbi yehubhu ye-ceramic njenge-round, square, retangular, hex, double-bores, tri-bores, njll ekupheleni evulekile. Okwamanje, singakwazi ukufezekisa imfuneko ephakeme kakhulu ukucacisa ngobukhulu ngokusebenzisa ukugaya emihle , CNC ukufakelwa.
Izigaba zomkhiqizo : Ama-Tuber Ceramic > I-Alumina Tube Ceramic
I-Diameter enkulu ye-Alumina Tube Ceramic
Emile Ngokucindezela I-Alumina Tube Ceramic